stroopwafel bụ otu n'ime ndị kasị na-eri ahụ obodo ato uto otu nwere ike ịhụ na Europe. N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ na ato uto, e nweghị arụmụka na onye malitere Ntụziaka na ebe. Na-eme achịcha na Dutch obodo nke Gouda mere ha mbụ. N'ihi na ha abịa na njem nke ọma, ha na-eme magburu onwe ya na -echeta.
Cuberdon bụ otu nke kasị mma na nke kasị aghọta obodo ato uto na Europe. Ọ bụ okpu-ekara, mgbe acha odo odo, jupụta na ndochi ndo. Mgbe ị na-aru n'ime otu, ezé gị mikpuo soft n'etiti ejuputa na ala. Ha na-akpọkarị ya Belgium ihe nzuzo zoro ezo. N'ihi na ọ bụ ike iji chebe ya mgbe a izu ole na ole, ha anaghị ebupụ ya mba ọzọ. Otú ọ dị, maka a njem nleta onye chọrọ ka na-agbalị ihe pụrụ iche na-eme ya n'ụlọ, na cuberdon zuru okè.